Mamerina mandinika ny fizahantany Maorisy ny governemanta
Home » Lahatsoratra farany farany » Tourism » Mamerina mandinika ny fizahantany Maorisy ny governemanta
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Maorisy • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
“Mila manamboatra ilay toe-javatra sarotra hatrehana isika, fotoana iray ahafahana mieritreritra indray Fizahan-tany Maurice ary koa ny hoaviny, ary ny governemanta dia miara-miasa amin'ny indostrian'ny hotely sy ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny indostrian'ny fizahantany mba handrafetana ny dingana ho avy.
Ity fanambarana ity dia vao tsy ela akory izay no nataon'ny tao amin'ny Antenimieram-pirenena ny praiminisitra lefitra, ny minisitry ny fanajariana ny tany sy ny fanajariana ny tany, ary ny minisitry ny fizahantany, Andriamatoa Steven Obeegadoo, ho valin'ny fanontanian'olona notontosain'ny mpitarika ny mpanohitra, Dr. Arvin Boolell, momba ny sehatry ny fizahan-tany.
Nasongadin'Andriamatoa Obeegadoo fa ny laharam-pahamehan'ny governemanta, miaraka amin'ny fiarovana ny fahasalaman'ny mpiray tanindrazana aminy, dia ny fiarovana ny asa sy ny fiarovana ny asa fivelomana.
Mikasika ny indostrian'ny fizahan-tany hatramin'ny faran'ny volana jolay dia vola mitentina 2 miliara eo ho eo no natolotra ho an'ny mpiasa maherin'ny 39,000 eo ambanin'ny Scheme Fandraisana fanampiana karama, ary tombanana ho 26 tapitrisa eo ho eo no efa voaloa manodidina ny 1,500. Maorisianina eo ambanin'ny fandaharana fanampiana ho an'ny tena. Tombanana ho 500 tapitrisa R ny vola havoaka mandritra ny volana Aogositra 2020, hoy izy nanamafy.
DPM Obeegadoo dia nanambara fa raha ny toe-java-misy manerantany momba ny Areti-mifindra COVID-19 ary ny zava-misy mbola tsy vita ny krizy Wakashio, dia zava-poana ny milaza ny ho avy tsy ho ela ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny amin'izao fotoana izao. Notsiahivin'ny minisitry ny fizahantany fa tamin'ny taona 2018, dia nisy mpizahatany 1.399 tapitrisa nitsidika an'i Maorisy izay 78% no nonina tao amin'ny hotely fandraisam-bahiny. Tamin'ny taona 2019, 1.383 tapitrisa ny tarehimarika nifanitsy tamin'izany, ary nandritra ny 3 volana voalohany tamin'ny taona 2020, mpizahatany 304,842 no nitsidika an'i Maorisy, ny isany nihena taorian'izay ary lasa tsy nisy intsony. Nanampy izy fa ny isa ho an'ny telovolana voalohany amin'ny taona 2020 mifandraika amin'ny fivoaran'ny asa eo amin'ny sehatry ny fizahantany dia atambatra.
Ny praiminisitra lefitra dia nanamafy fa ny fitondram-panjakana dia manao hetsika fifandanjana marefo eo amin'ny filàna fiarovana ny aina amin'ny lafiny iray ary mandrisika ny fanarenana ara-toekarena ny ankilany raha ny fanamby kosa dia goavana sy mampatahotra tokoa ho an'ny firenena sy ny governemanta rehetra manerantany. Nanao antso avo Andriamatoa Obeegadoo ny hisian'ny firaisankina nasionaly sy ny fitiavan-tanindrazana tsy mitongilana satria ny tsenan'ny fizahantany no manelingelina manokana ny tatitra sy fanambarana amin'ny haino aman-jery iraisam-pirenena. Mila mandray andraikitra isika rehetra raha manana am-po ny hoavin'ny sehatry ny fizahantany, hoy izy namarana.